ShortStack - ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများနှင့်လူမှုပြိုင်ပွဲများလွယ်ကူအောင်လုပ်သည် Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 23, 2020 အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 23, 2020 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်သည် Facebook ကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုမှတဆင့်သင်၏စီးပွားရေးသို့အသွားအလာကိုသယ်ဆောင်ရန်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေနှင့်အသုံးပြုပါကလူမှုရေးအရပေါင်းစည်းထားသည့်ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုရန်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ShortStack ဖြင့်သင်အထူးပစ်မှတ်ထားသောအီးမေးလ်၊ လူမှုရေးမီဒီယာ၊ ဒီဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများမှအထူးပစ်မှတ်ထားထားသည့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ShortStack ဖြင့်သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပြိုင်ပွဲများ၊ လက်ဆောင်များ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများနှင့်အခြားအရာများအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသောအပြန်အလှန်ထိရောက်သောဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ ထူးခြားချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများတွင် -
Incentivize နှင့် gamify - သင်၏ပုံစံကိုဖြည့်သူများကိုဆုရရန်အခွင့်အလမ်း ပေး၍ ဆုချပါ။ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပဟေizိတွေလိုမျိုးဖန်တီးပါ မင်းဘယ်လိုအားကစားကားမျိုးလဲ။ or ဘယ် 1990 ရက်ပ်ပါလဲ နှင့်အဖြေကိုမထုတ်ဖော်မီအီးမေးလ်လိပ်စာကိုစုဆောင်းပါ။
အဖြူ - တံဆိပ်ကပ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းများ - စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းများသည်သင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် URL ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။ အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အဖြူရောင်တံဆိပ်အတွေ့အကြုံများပေးခြင်းတို့အပြင်သူတို့သည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏ SEO ကိုတိုးတက်စေပြီးသင်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသွားသည့်အခါသင်တန်းသားများကိုယုံကြည်မှုထပ်မံပေးသည်။
သင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန် action-gating ကိုအသုံးပြုပါ - visitors ည့်သည်များ၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုဖမ်းယူရန်ကမ်းခြေစာမျက်နှာများရှိသည်။ ShortStack ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ပုံစံကိုလူများဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူစုဆောင်းနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအတွက်လဲသူတို့ဟာမင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်လှမ်းမီခွင့်ပေးထားတယ်၊ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ၀ င်ခွင့်၊
ပြီးပြည့်စုံသောဒီဇိုင်းထိန်းချုပ်မှု - ရှင်းလင်းပြတ်သားသောခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အတူရှုပ်ထွေးသောဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာများကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏ visitors ည့်သည်များ၏အာရုံစိုက်မှုနှင့်သူတို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကို ShortStack ၏ချောချောမွေ့မွေ့ပုံစံများနှင့်ရိုးရှင်း။ မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုပုံစံများကိုအသုံးပြုပါ။ ShortStack ၏စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောတင်းပလိတ်များသည်သင့်အား developer နှင့် designer တို့၏ကျော်လွှားမှုကိုခွင့်ပြုသည်။
သင်၏မှတ်ချက်များအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်သည့်နေ့ရက်များပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ သင်၏ Instagram သို့မဟုတ် Facebook တင်ထားသောမှတ်ချက်များအားလုံးကိုချက်ချင်းဆွဲယူရန် ShortStack ကိုအသုံးပြုပါ။ မှတ်ချက်များနှင့်မှတ်ချက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ပါဝင်သည်။ ထူးခြားချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများတွင် -
ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူကိုလျင်မြန်စွာရွေးချယ်ပါ - ပြိုင်ပွဲအောင်မြင်သူကိုရွေးရန် ShortStack ၏ကျပန်း entry selector ကိုသုံးပါ။ ဆုရရှိသူတစ် ဦး သို့မဟုတ်များစွာသောကို ရွေးချယ်၍ သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အနိုင်ရသူကိုကြေညာပါ။
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင့်နောက်လိုက်တည်ဆောက်ပါ - ပြိုင်ပွဲများကို ၀ င်ရောက်ရန်မှတ်ချက်ဖြင့်ပါဝင်သူများသည်သင်၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်သို့တင်ရန်မှတ်ချက်ပေးရမည်။ ဒီအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးသင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏မြင်သာမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ မှတ်ချက်ပေးသူများအားသင်၏ပရိုဖိုင်းကိုလိုက်နာရန်သို့မဟုတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရန်အားပေးပါ၊ ထို့နောက်မှတ်ချက်များပြိုင်ပွဲများကိုပုံမှန်ကျင်းပပြီးသင့်နောက်လိုက်များတိုးတက်လာသည်ကိုကြည့်ပါ။
ထပ်နေသည့်မှတ်ချက်များကိုအလိုအလျောက်ဖယ်ရှားပြီးနှစ်သက်သောမဲအဖြစ်ထည့်သွင်းပါ - ShortStack ထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲမှတ်ချက်ပေးသောသင်တန်းသားများအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ် - ထပ်ခါထပ်ခါ entries တွေကိုအလိုအလျှောက်တားဆီး။ ထပ်တူများကိုထည့်သွင်းလိုပါသလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! ရွေးချယ်မှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပို့စ်များအတွက်လည်းသင်သည်မှတ်ချက်များအကြိုက်ကိုမဲများအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးမဲများများရရှိခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်သူများ၏အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
သင်၏ပုံစံကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကဖြည့်စွက်သောအခါအလိုအလျောက်အီးမေးလ်များကိုချက်ချင်းပို့ပါ။ သူတို့ကိုသင်၏စာရင်းတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်အချို့အစိတ်အပိုင်းများသို့ပို့ပါ။
စီစဉ်ထားအီးမေးလ်များကိုအသုံးပြု။ ဆောင် Engage - သင်၏ ShortStack ပုံစံများမှတစ်ဆင့်သင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောခဲများကိုမဖြုန်းတီးပါစေနှင့်။ သင်စုဆောင်းထားသည့်ထိုအီးမေးလိပ်စာများကိုအသုံးပြုပြီးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အီးမေးလ်များကိုပို့ပါ။ အနိုင်ရသူအားကြေငြာရန်၊ ထုတ်ကုန်အသစ် / လာမည့်အဖြစ်အပျက်များကိုကြော်ငြာရန်၊ အထူးအပေးအယူများဖြန့်ဝေရန်၊ ပြိုင်ပွဲအတွက်မဲပေးခြင်းကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်း၊ လာမည့်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေရန်အီးမေးလ်များကိုစီစဉ်ပါ။
ဖောက်သည်များနှင့်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ - Autoresponders ကို သုံး၍ သင်၏ပြိုင်ပွဲဝင်သူများသို့မဟုတ်သင်၏ပုံစံကိုဖြည့်သူတိုင်းထံသို့အတည်ပြုအီးမေးလ်ပို့ရန်သုံးပါ။ Autoresponders များသည်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ထားသောနှုန်းထားများရှိပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျ (သို့) အထူးကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုကိုပေးပို့ရန်အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုပါ။
အများဆုံးသက်ရောက်မှုအတွက် filter ကိုလက်ခံသူများ - အီးမေးလ်လက်ခံရရှိသူများကိုစစ်ထုတ်ခြင်းကသင့်သတင်းစကားကိုမှန်ကန်သောလူများမြင်အောင်သေချာစေသည်။ သင်၏စာရင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ သို့မှသာဝင်ခွင့်များကိုအတည်ပြုပြီး၊ ဓာတ်ပုံပါ ၀ င်သည်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသောရက်အနည်းငယ်အတွင်းလက်ခံရရှိသူများသာသင်၏အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချောမွေ့စေသည် - သီးခြားအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းနှင့်ပေါင်းစည်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ShortStack သည်သင်အားအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်နှင့်အီးမေးလ်များအားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်စုစည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
တင်းပလိတ်များနှင့်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအီးမေးလ်များကိုသတ်မှတ်ပါ - အချိန်တိုတယ်? အီးမေးလ်တင်းပလိတ်များသည်သင့်အားမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအီးမေးလ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ရွေးချယ်နိုင်သောတင်းပလိတ်များများစွာရှိပြီး ShortStack အီးမေးလ်ပုံစံများကိုသင်ပို့ရန်ရွေးချယ်သောအီးမေးလ်အမျိုးအစားများအတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သင်၏ကြိုးပမ်းသူအသစ်များကိုကြိုးပမ်းပါ - တစ်စုံတစ်ယောက်ကသင်၏စာပို့စာရင်းသို့ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အလိုအလျောက်ပို့ရန်အစပျိုးအီးမေးလ်များကိုတီထွင်ပါ။ ဤနောက်ဆက်တွဲအီးမေးလ်များသည်သင့်ဖောက်သည်များနှင့်လက်ချောင်းကိုမမြှောက်ဘဲအဆက်မပြတ်ထိတွေ့နေရန်ကူညီသည်။
CAN-SPAM နှင့် GDPR လိုက်ဖက်သော - Double-opt-in သည် signup လုပ်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်အတည်ပြုခြေလှမ်းတစ်ခုထပ်ထည့်သည်။ ဝင်ရောက်သူများသည်သင်မှသင့်ထံအီးမေးလ်များလက်ခံလိုကြောင်းအတည်ပြုရမည်။ Double opt-in သည်ဥရောပသမဂ္ဂရှိ GDPR အပါအ ၀ င်ဥပဒေအသစ်များကိုသင်လိုက်နာရန်သေချာစေသည်။ ShortStack သည်သင့်အတွက် CAN-SPAM ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေးစိတ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်သင့်အားအနားယူစေသည်။ သင်အီးမေးလ်တွင်သင်လျှောက်လိုသည့်စီးပွားရေးပရိုဖိုင်းကိုသာရွေးပါ။
သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်ကနည်းပညာကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲပျော်စရာကောင်းပြီးထိရောက်တဲ့ထိရောက်တဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးပြုတဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုတည်ဆောက်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ကျနော်တို့ကတစ် ဦး Affiliate ဖြစ်ကြသည် ShortStack
Tags: အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်သူအီးမေးလ်စီစဉ်သူFacebook အက်ပလီကေးရှင်းများFacebook မှတ်ချက်ပြိုင်ပွဲဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပြိုင်ပွဲဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာများမိုဘိုင်း app များရေတိုလူမှုရေးဆင်းသက်စာမျက်နှာများ